AKHRISO: Midowga musharixiinta oo kulan saacado kadib war ka soo saaray doorashada Somalia.
July 18, 2021 Xuseen 1
Golaha midowga musharixiinta madaxweynaha Soomaaliya ee doorashada oo galabta illaa caawa shir uga socday Hotelka Jazeera ayaa ka soo saaray war saxaafadeed ay uga hadlayaan xaalada doorashada iyo caqabado ay sheegeen in haddii aan xal degdeg ah loo helin inay dib u dhac ku keeni karto habsami u socodka doorasho hufan oo loo dhan yahay.
War qoraal ah oo laga soo saaray kulankii Midowga Musharaxiinta ayaa waxa ay ku sheegeen inay walaac xoogan ka muujinayaan in doorasho xor iyo xalaal ah ka dhacdo dalka ayna waqtigii lagu heshiiyay ay ku qabsoonto.
Isbaaradii MARIINAAYO & BERMUDA miyaa la soo celin rabaa?!
Horta xaq bay u leeyihiin in ay dereenkooda si silmiya u cabbiraan; waa soo dhoweynahayaa middaa. Waa muuqataa oo caqabado waa jiraan, laakiin hal dhinac uun bay walaac ka muujiyeen taasina caddaalad maaha.
Waxaynu wada arkaynay in Amxed Islaam uu murashax xildhibaannimo ka soo celiyey hawada. Taas kaliya marka la eego baa ah daliil cad in meesha aysan ka jirin wax la isku hallayn, maaddaama isbaaro hawada loo dhiganayo murashixiintii.
Gunaanadkii, markii aan senatoor Muuse-Yalaxoow dhowaan dhegaystay hanjabaaddiisii, ee aan warqaddan hadda arkay, waxa ay u muuqataa in ISBAARADII Marinaayo & Bermuda la soo celin rabo. Waayo nimankani waxba islama hayaan xaqiiqdii; marka, dhagaxtuurkii baa bilawday. Haddee, walaalkay, Saciid-Gedona warkiisa lama hayo; baarlamaankiisii baa lagu kiciyey.